Sida loo bilaabo ganacsiga sawir qaadista 2021 | Hagaha Buuxa
Bogga ugu weyn Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Sawir Qaadista 2022 | Hagaha Buuxa
Farshaxanka iyo farsamada sawir-qaadista ayaa horumaray iyadoo qiimaha kamaradaha tayada sare leh ay hoos u sii socdeen. Dad badan, ganacsiga sawir qaadashadu waa ka badan yahay habka lagu xafido xusuusta.
Sawir qaadashadu waxay kuu ogolaanaysaa inaad naftaada u sheegto hab lagu qanco. Waa hab lagu fasiro adduunka, lagana dhigo wax aan la arkin oo muuqda. Sido kale waa hab lagu noolaado oo sawir qaadista loogu badalo xirfad dad badan oo leh xirfado sawir qaadis oo wanaagsan.
Way adkaan kartaa in laga beddelo sawir-qaadista xilli-ciyaareed ahaan loona beddelo mihnad shaqo iyadoo la bilaabayo ganacsi sawir-qaadis (ama la ballaarinayo ganacsiga sawir-qaadista ee jira).
Yaa bilaabi kara Ganacsi sawir qaade?
Sawirqaaduhu waa farsamo ahaan qof kasta oo haysta kamarad, sida darawalku u yahay farsamo ahaan qof kasta oo baabuur haysta. Golfer-ku wuxuu noqon karaa qof kasta oo leh naadiyo kala duwan. Farshaxanku waa qof ku shaqeeya burushka rinji iyo fududaynta. Waxa kaliya ee kala saaraya waa taariikhdooda waxbarasho iyo khibradooda shaqo.
Immisa ayay ku kacaysaa in la bilaabo ganacsi sawir qaade?
Haddii aad dhab ka tahay sawirkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad lacag u dhigto miisaaniyada ganacsiga si ay kaaga caawiso balaarinta arsenalkaaga. Kuwa soo socdaa waa liiska agabka iyo agabka la soo jeediyay, oo ay la socdaan qiimahooda qiyaas ahaan:
Kamarada: $1,000 ilaa $2,000
Muraayada kamarada: $1,000
Kaararka xusuusta: $50
Wadayaasha dibadda: $100
Laptop-ka wax lagu daabaco: $2,000
Martigelinta websaydhka: $50
Gadaal iyo iftiin: $500
Software-ka tafatirka: $20.99 bishii (Photoshop)
Shandad kamarad: $150
Software xisaabaadka: $10 ilaa $30 bishii ee qorshayaasha aasaasiga ah
Qalab badan oo liiskan ku jira, sida kamarada iyo Laptop-ka, waxay u badan tahay inay horeba kuugu jireen, taasoo hoos u dhigaysa kharashaadkaagii hore.
Sideen Ku Bilaaban Karaa Ganacsi Sawir Qaadasho Lacag La'aan?
Bilaabida ganacsi bilaa raasamaal maaha fikrad wanaagsan. Markaa faa'iido ma leh in la sugo wakhtiga saxda ah sababtoo ah weligeed ma iman doonto. Had iyo jeer waxaa jiri doona shay aadan haysan, wax aadan u baahnayn, ama wax kasta oo jidka kaa gala, markaa hadda waa wakhti fiican oo aad ka takhalusi karto. Suuragal maaha in aad wax maal gashid shirkaddaada. Markaa, marka aad lacag haysato, waa inaad doorataa meesha ay aadi doonto. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad sawirto, waxaad u baahan doontaa baabuur iyo batrool, ama waxaad u baahan doontaa inaad raacdo gaadiidka dadweynaha ama aad xaddido inaad sawirro ka qaadato agagaarkaaga. Markaad go'aansato inaad bilowdo ganacsi sawir qaade, waxay aad u macquul tahay inaad horey u qaadatay sawirro oo aad haysato sawirro badan oo aad ku shaqeyso.
Maxaad ugu baahan tahay Meherad sawir qaade?
Kamarada wanaagsan waa qalabka ugu horreeya ee aad u baahan doonto si aad u bilowdo ganacsi sawir qaade. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu baaro. Moodooyinka qaarkood waxay u shaqeeyaan si ka fiican goobaha qaarkood, marka waxaad u baahan doontaa inaad samayso daraasad badan si aad u ogaato kuwa sida ugu fiican kuugu shaqayn doona.
Tripod sidoo kale waa qalab loo baahan yahay inuu lahaado tan iyo markii uu kuu ogolaanayaa inaad kaameradaada ku adkaysato oo aad sawirto sawiro badan oo mawduuc kasta ah adigoon dhaqaaqin kamarada.
Marka aad kamaradaada ka raraynayso meel una guurinayso meel kale, xaqiiji inay amaan tahay. Markaa naftaada u soo iibso kiis kamarad wanaagsan si aad kamaradaada uga ilaaliso inay burburto ama dhaawacdo.
Sawir kasta oo wanaagsan wuxuu u baahan yahay isticmaalka nalka. In kasta oo iftiinka dabiiciga ahi uu ku habboon yahay, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad maalgeliso iftiinka istuudiyooyinka qaarkood haddii ay dhacdo in iftiinka qorraxdu aanu ku filnayn.
Waxa laga yaabaa inaad isticmaasho muraayado kala duwan si aad kamaradaada ugu qabato noocyo kala duwan oo sawiro ah. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad hagaajiso tayada sawiradaada, waxay ahaan lahayd fikrad wanaagsan inaad maalgashato muraayadaha kala duwan.
Iyada oo ku xidhan nooca tallaalada aad qorshaynayso inaad qaadatid, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad iibsatid ama u samayso qaybo ka mid ah istuudiyo ama sawir qaadis.
Haysashada qalabyo kala duwan oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay faa'iido leedahay. Doorashadaada agabka wax lagu shido waxaa lagu go'aamin doonaa niche-kaaga. Haddii aad tahay sawir-qaade aroos, tusaale ahaan, guud ahaan ma rabi doontid qalabyo la mid ah sida sawir qaade xayawaan ah. Lahaanshaha dhawr ikhtiyaar oo kale, dhanka kale, waxay noqon kartaa fikrad caqli gal ah.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato inaad kiraysato ama aad leedahay meel istuudiyaha ah ganacsigaaga sawir qaadista, gaar ahaan haddii aad qorshaynayso in macaamiishu kuugu yimaadaan sawirro.
Gaadiid lagu kalsoonaan karo:
Taas beddelkeeda, waxaad bilaabi kartaa ganacsi sawir qaade kaas oo kuu ogolaanaya inaad u tagto macaamiisha. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan doontaa qaab la isku halayn karo oo aad ku gayso oo aad ka soo qaadayso caleemahaaga.
Taleefanka casriga ah oo leh kamarad wanaagsan:
Iyadoo ay u badan tahay inaadan u isticmaali doonin talefankaaga casriga ah ama mobaylkaaga sidii kamaradaada aasaasiga ah ee ganacsigaaga sawir qaadista, haddana waxay noqon kartaa mid faa'iido leh. Sababtoo ah warbaahinta bulshadu waxay noqon kartaa qalab ku anfacaya wadaaga sawirada iyo sawirada muuqaalka gadaashiisa, haysashada taleefan casriga ah oo qaadi kara sawiro tayo leh ayaa faa'iido leh.
Kadib markaad sawirto sawiradaada, waxaad u baahan doontaa software kuu ogolaanaya inaad wax ka beddesho oo aad hagaajiso. Sawirqaadayaashu waxay ka faa'iideysan karaan barnaamijyada sida Photoshop iyo Lightroom.
Taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad u baahan doonto kombuyuutar si aad u saxdo oo u hayso sawiradaada dhijitaalka ah.
Apps-ka Mobilka Sawir Qaadista:
Intaa waxa dheer, marka aad sawirada ku qaadayso qalabkaaga moobilka, waxa ay faa'iido u yeelan kartaa inaad soo dejiso dhawr barnaamij oo sawir qaade ah si ay kaaga caawiyaan kor u qaadida sawirkaaga mobaylka.
Kanaalka Baraha Bulshada:
Waa inaad sidoo kale ka abuurtaa akoonnada baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram si aad ula wadaagto sawiradaada iyo wixii ku cusub macaamiisha mustaqbalka.
Ganacsiga sawir qaadashadu wuxuu ka faa'iidaysan karaa inuu yeesho degel wanaagsan. Markaa hel magac domain ku habboon astaanta shirkaddaada iyo summadaada.
Bootfooliyada khadka tooska ah:
Sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad shaqada sawir qaadid geliso mareegahaaga ama meel kasta oo online ah. Natiijo ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad diirada saarto dhisidda faylalka sawirka waqti ka dib.
Kaararka ganacsigu waxa ay noqon karaan hab cajiib ah oo lagu xayaysiiyo astaantaada oo loo siiyo macaamiisha suurtogalka ah hab sahlan oo ay kula soo xidhiidhi karaan marka aad aado shaqooyinka ama la macaamilka macaamiisha.
Hard Drive-ka Dibadda:
Sawirada dhijitaalka ah waxay si dhakhso ah u buuxin karaan wadida adag ee kombiyuutarkaaga. Maalgelinta darawal adag oo dibadda ah si loo kaydiyo dhammaan faylashaas waaweyn marka aan la isticmaalin waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan.
Waxa kale oo suurtogal ah in aad u baahato inaad shirkaddaada ka diiwaan geliso dawladda hoose ama gobolkaaga. U fiirso shati kasta oo ganacsi oo laga yaabo in looga baahdo aaggaaga ganacsiyada sawir qaadista.
Waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in sawiradaadu ay tayo wanaagsan yihiin marka aad daabacayso caddaynta ama alaabta suuq-geynta. Maalgeli daabace sawir tayo sare leh si aad sawiradaadu si dhab ah uga muuqdaan.
Immisa Ayuu Sameeyaa Ganacsiga Sawir Qaadista Sannadkii?
Dakhliga caadiga ah ee sawir qaadayaashu waa qiyaastii $30-40k sanadkii, sida uu qabo Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ee Federaalka, iyadoo 10% ugu sarreeya ee dadka qaata ay helaan in ka badan $70,000 sanadkii.
Ma ka bilaabi karaa meherad sawir qaade guriga?
Waa kuwan tillaabooyinka lagu bilaabayo haddii aad diyaar u tahay in lagu bilaabo in lagugu siiyo si aad u sawirto sawirada.
1. Go'aan ka samee noocyada adeegyada sawir qaadista ee aad bixin doonto: Sawir qaadayaasha waxaa looga baahan yahay ganacsiyada iyo shakhsiyaadka sababo kala duwan dartood. Buug-yaraha, ganacsiyadu waxay u baahan yihiin sawirada alaabtooda. Hantiilayaasha waxay u baahan yihiin sawirada guryaha ay iibinayaan. Wargeysyadu waxay u baahan yihiin sawirro la xidhiidha sheekooyinka ay daabacayaan. Waxaad sidoo kale qaadi kartaa sawirro ama sawiro aroosyada haddii aadan rabin inaad sameyso sawir ganacsi.
2. Samee qorshe ganacsi: Qorshaha ganacsigu wuxuu qeexayaa waxyaabaha gaarka ah ee shirkaddaada, sida adeegyada aad bixiso, sida aad uga sooci doonto tartanka, odoroska maaliyadeed, iyo xeeladaha suuqgeyneed. Hadda waa wakhti ku habboon in la qiyaaso istaraatiijiyadaada qiimaha. Haddii aad rabto in aad samayso $50,000 sannadkii oo aad aaminsan tahay in aad ballansan karto 26 aroos sannadkii, waa in aad ka qaadaa qiyaastii $2,000 arooskiiba. Qalabka, saadka, iyo kharashka safarka, iyo sidoo kale wakhtigaaga, waa in dhamaantood lagu saleeyaa qiimahaaga.
3. Dooro qaabka ganacsigaaga: Mulkiilaha keligiis ayaa ah ikhtiyaarka ugu toosan uguna kharash badan. Abuuritaanka shirkad mas'uuliyad xaddidan (LLC) waxay, dhanka kale, ku siin doontaa ammaan ka wanaagsan hantidaada gaarka ah haddii aad la kulanto arrimo sharci.
4. Dooro magac ganacsi: Magaca ganacsigaagu wuxuu noqon doonaa sawirkaaga astaanta, markaa dooro magac ka tarjumaya nooca sawir-qaadista ee aad rabto inaad samayso. Waxaad yeelan kartaa magac kaftan ah haddii aad samaynayso sawirro caruur ah, laakiin haddii aad samaynayso sawir ganacsi ama aroosyo, waxaad u baahan doontaa wax u eg xirfadle ama heer sare ah. Waxaad hubaal ahaan u baahan doontaa inaad xarayso bayaan magac khiyaali ah xafiiska karraaniga degmadaada haddii aadan magacaaga ku isticmaalin magaca ganacsigaaga. Waa inaad sidoo kale ka hubisaa Xafiiska Patent and Trademark ee Maraykanka si aad u aragto haddii magaca la calaamadeeyay.
5. Hesho shati ganacsi ama ogolaansho sida ay u baahan tahay magaaladaada ama degmadaada: Markaad doorato magac ganacsi oo aad samaysato qaab dhismeedka ganacsigaaga, waxaad u baahan doontaa inaad hesho shatiga ganacsiga ama ogolaanshaha sida looga baahan yahay magaaladaada ama degmadaada. Inkasta oo aad sawirro ku qaadi karto kamarad dijital ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ururiso canshuurta iibka haddii aad ku nooshahay gobolka. Dukumeentiyada lagama maarmaanka ah iyo macluumaadka ku saabsan sida loo ururiyo loona bixiyo canshuurta iibka waxaa laga heli karaa xisaabiyaha gobolkaaga ama xafiiska canshuuraha. Waxaad furi kartaa akoon ganacsi markaad haysato shatiga ganacsiga
6. Uruurinta qalabka iyo saadka loo baahan yahay:
Haddi sawir qaadistu ay tahay wakhtigaaga wakhti-ciyaareedka, waxa laga yaabaa inaad hore u lahayd qalab badan oo lagama maarmaan ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa inaad go'aamiso in tayadu ay sarrayso si loo caddeeyo dallacaadda adeegyada. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa muraayadaha, nalalka, baytariyada, software tafatirka sawirka, warqad sawir oo tayo sare leh, iyo baakad si aad sawirada ugu qaybiso macaamiisha, marka lagu daro kamarad. Xakamaynta iftiinka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay u baahan tahay isticmaalka nalalka iyo muraayadaha.
7. Abuur agab suuqgeyneed: Samee shabakad marka lagu daro kaararka ganacsiga iyo buug-yaraha. Kahor intaadan soo galin sawirada mawduucyadaada internetka, hubi inaad haysato ogolaansho. Sidoo kale, ka samee koontooyin baraha warbaahinta bulshada halkaas oo laga yaabo in laga helo tirakoobka bartilmaameedkaaga. Haddii aad sawirto aroosyada, tusaale ahaan, waa inaad samaysaa bogga Pinterest.
8. Suuq, suuq, suuq: Suuqgeyntu waa furaha ganacsiga sawir qaadista ee guuleysta. Haddii qofna ku shaqaaleysiin waayo, ma awoodid inaad qaadato oo aad hesho magdhow sawirada. Isticmaal shabakadahaaga shakhsi ahaaneed iyo kuwa xirfadda leh si aad u faafiso warka ku saabsan shirkaddaada marka lagu daro kaararka ganacsiga, buug-yaraha, iyo mareegaha. Ka qaybgal bandhigyada ganacsiga iyo waxqabadyada loogu talagalay dhageystayaasha bartilmaameedka ah. Ka qaybgal bandhigyada arooska, tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad sameyso sawir-qaadis aroos. Ka qaybgal bandhigyada eeyaha haddii aad rabto inaad toogto sawirro xayawaan ah.
Marka ay timaado in la bilaabo ganacsiga sawir qaadista, waxaa jira waxyaabo badan oo la tixgeliyo. Si kastaba ha ahaatee, taladan dhamaystiran oo ku saabsan sida loo aasaaso ganacsi sawir, waxaad yeelan doontaa lug ku saabsan tartanka oo aad si fiican ugu socon doontaa jidkaaga guusha.
Waa Kuma Sawirqaade?
Sawirqaadayaashu waxay qaadaan sawirro sawir sawiraya oo sheeko ka hadlaya.
Sawir qaade farsamo ahaan waa qof kasta oo haysta kamarad.
Haddii aad dhab ka tahay sawirkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad lacag u dhigto miisaaniyada ganacsiga si ay kaaga caawiso balaarinta arsenalkaaga.
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Sawir Qaadasho
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Sawir-qaadis Ku-saleysan
Sida loo bilaabo ganacsi sawir qaade: Hagaha ugu dambeeya
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Nadiifin Qallalan 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Ganacsiga nadiifinta qallalan waa mid ka mid ah fursadaha ganacsi ee ugu faa'iidada badan ee bixiya si fiican. Sababtoo ah xaqiiqda…
15 Dhiirigelinta Xigashooyinka Leslie Knope ee Hoggaanka & Adeegga
Haddii aad taageere u tahay NBC sitcoms, markaas waxaad u badan tahay inaad maqashay xigashooyinka Leslie Knope. Leslie Babara…